Erectile Dysfunction Causes ပန်းသေ-ပန်းညှိုး အချက် (၉) ချက် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Erectile Dysfunction Causes ပန်းသေ-ပန်းညှိုး အချက် (၉) ချက်
ဒီစာမျိုးကို အရင်ကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာမတင်ပါ။ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာတွေ ဘလော့ခ် ပျက်သွားလို့သာ စာတွေကိုရွေးတင်ပါတယ်။ နားလည်မှုပေးစေလိုပါတယ်။
ဆရာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Reply လုပ်ပေးလို့ လေးလဲလေးစားမိပြီး အားကိုးရမဲ့ ဆရာကောင်းတွေ့လို့ အရမ်းဝမ်းသာမိပြီး အားတက်မိပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်လကုန် သင်္ဘောတက်ရပါတော့မယ် ဆရာ။ အခုဆို ကျွန်တော်ခံစားရတာ စောစောကလိုပါပဲ ဘယ်ဘက်ဥ ကြင်ကြင်နေတာပါ။ ဘုရားရှိခိုးလို သမင်ခွေထိုင်ရင်လဲ နဲနဲကြင်လာပါတယ်။
ကန်တော့ဗျာ ထူးခြားမလားဆိုပြီး ကိုင်ကြည့်တော့လဲ ဥကမနာပါဘူးဆရာ ဘာလို့ကြင်ကြင်နေတာလဲဆရာ။ စိတ်တိုင်းမကျဘူး စားလဲ ဒီစိတ် အိပ်လဲဒီစိတ်နဲ့ ကင်ဆာ နဲ့ ကလေးမရမှာ ပန်ညိူးပန်းသေဖြစ်မှာ အရမ်းရမ်းကိုကြောက်မိပြီး သောကရောက်နေမိတယ် ဆရာ။ ဆရာဆီ ကျွန်တော်လာပြလို့ရမလားဆရာ။ ကျွန်တော်က့့ မြို့နယ့့် မှာနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို ကုသပေးပါလားဆရာ။ ဘယ်လောက်ပဲဝေးနေပါစေ ကျွန်တော်လာကုပါရစေလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေဆရာ။ သင်္ဘောပေါ်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်ပဲပြန်လာနေရမှာကို နဲ့ ကင်ဆာ ပန်းညှိုးပန်းသေဖြစ်မှာ အရမ်းကိုကြောက်နေမိလို့ပါဆရာ။
ဒီစာထဲမှာ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်စေတဲ့အချက် (၉) ချက်ထဲမှာ (၄) ချက်ဟာ စိတ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ပါမယ်။ လုံးဝစိုးရိမ်ပူပန်မှု မရှိပါနဲ့။ ဆရာက နိုင်ငံအပြင်မှာနေရပါတယ်။ တင်ပျဉ်ခွေလို့ရေးရပါတယ်။ ထုံကျဉ်လို့ရေးရပါတယ်။ တင်ပလ္လ္လင်လို့လဲ ရေးကြတယ်။
လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တာ ဦးနှောက်ကနေ စတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေရင် ဘယ်လိုစိတ်မျိုးမဆို ပုံမှန်မဖြစ်စေတာထဲမှာ Erectile dysfunction (ED) လိင်အင်္ဂါမသန်မာနိုင်တာလဲ ပါတယ်။ ပြဿနာက စိတ်ကျဆေးသောက်လို့ ပိုဆိုးနိုင်ပြန်သေးတယ်။
အရက်နဲနဲသောက်ရင် စိတ်ပေါ့ပါးပြီး လုပ်ရဲကိုင်ရဲဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ တန်ဆေး-လွန်ဘေးအစစ်က အရက် ဖြစ်တယ်။ အရက်များရင် လူရော လိင်အင်္ဂါပါ မသန်မာနိုင်မာတာ့ဘူး။ ဒီလိုဖြစ်တာက ယာယီသဘောပါ။
ED ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါကု ဆေးဝါးတွေရှိတယ်။ သွေးတိုးကျဆေး၊ အနာသက်သာဆေး၊ စိတ်ကျဆေး၊ နောက်ပြီး Street drugs မူးယစ်ဆေးတွေထဲက Amphetamines, Cocaine နဲ့ Marijuana တွေကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
4. စိတ်-ရုပ် ဖိစီးမှု
ရုံးအလုပ်၊ အိမ်အလုပ် လုပ်စရာတွေ များနေတာကနေ လူ-စိတ်ပင်ပန်း၊ ကျားအင်္ဂါ မလန်းနိုင်ဖြစ်စေတယ်။ လူနေမှုပုံစံပြင်ပါ။ အိပ်ချိန်-စားချိန်မှန်ပါစေ။ ကိုယ်လက်လှုတ်ရှား၊ အားကစားလုပ်ပါ။ လိုအပ်ရင် ပညာရှင်နဲ့ ကုသမှုခံယူပါ။
ဒေါသထွက်နေသူ မျက်နှာနီရဲလာတယ်။ လိင်မှုကိစ္စအတွက် သွေးပိုလျှောက်လာဘို့က ကျားအင်္ဂါမှာဖြစ်နေတယ်။ စိတ်တိုနေရင် စိတ်ကူးလေးတွေ ဘယ်လိုယဉ်မလဲ။
ဆက်ဆံမှု မပြုခင်ကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ် နည်းနေရင်၊ ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလား၊ ရောဂါရမှာလား၊ ကိုယ်ဝန်ရသွားမှာလား၊ သူများတွေ သိသွား-မြင်သွားမှာလား၊ အထင်သေးသွားမှာလား၊ မုန်းသွားမှာလား စိုးရိမ်နေရင် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။
လူက သူများတွေထက် သိသိသာသာဝနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ မကျေနပ်ဖြစ်နေမယ်။ ကျား-ဟော်မုန်းကလဲ အထွက်နည်းနေမယ်။ လူကဝတော့ သွေးတိုးတို့ နှလုံးရောဂါတို့လဲ တွဲနေနိုင်တယ်။ သွေးကြောကျဉ်းတာဆိုရင် လိင်အင်္ဂါဆီ သွေးအလာနည်းစေမယ်။
Low libido လိင်စိတ်နည်းတာနဲ့ ED လိင်အင်္ဂါမသန်မာတာ မတူပါ။ ဖြစ်စေနိုင်တာတွေက ထပ်နေတတ်တယ်။
အာရုံကြော၊ ကြွက်သား၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုတွေ ကောင်းနေရမယ်။ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ သွေးကြောကျဉ်း၊ ဆီးအကျိတ် ရောဂါတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒီရောဂါအတွက် ဆေးတွေကလနေလဲ ဖြစ်နိုင်တာ တချို့ရှိတယ်။
ကိုယ့်လိင်ကိစ္စ အားနည်းနေတာကို ဆရာဝန်ပြောဘို့ ရှက်တတ်ကြတာ ပြောမထွက်တာ လူအများစုဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းကို တိုင်ပင်တာလဲ နည်းလှတယ်။ စာတွေဖတ်ချင်ပေမဲ့ ကောင်းတာ ဘယ်မှာရှာရမလဲ မသိဘူး။ ကြော်ညာကောင်းတာကို အဟုတ်ထင်ကြတာလဲ မနည်းဘူး။ FDA က တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဆေးတွေကိုသာ သုံးပါ။
1. Erectile Dysfunction Medicines ပန်းသေ-ပန်း ညှိုးအတွက်ပေးတဲ့ဆေးများ
2. Erectile Dysfunction Physiology ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ရောဂါဗေဒ
3. Erectile Dysfunction ပန်းသေ-ပန်းညှိုး
4. Viagra သန်မာစေတဲ့ဆေး
5. Viagra in Heart Disease နှလုံးရောဂါ နဲ့ (ဗိုင်ယာဂရာ)